Aogositra 7, 2018 Admin
SEC fahatarana Bitcoin ETF fanapahan-kevitra Septambra
Ny US Fiarovana sy Exchange Commission efa ela ny fanapahan-kevitra amin'ny tolo-kevitra Bitcoin ETF, manosika ny farany tapa-kevitra mialoha mihoatra ny iray volana. Ao amin'ny didy navoaka tao amin'ny 7 Aogositra, manam-pahefana tao amin'ny sampan-draharaha dia nanoratra fa ny tenany izy ireo manome fotoana bebe kokoa mba niniana amin'ny hanaiky na inona no ho voalohany fifanakalozana-varotra vokatry ny karazany any Etazonia.
Izany koa angamba unsurprising, fa nomena tany aloha, SEC manam-pahefana no nampiasa ny fahafahany misafidy ny hanaraka ny hery manosika indray fanapahan-kevitra amin'ny Bitcoin ETFs.
Maerki banky Soisa dia manolotra tolotra ho cryptocurrency orinasa
Zurich-monina banky tsy miankina Maerki Baumann no nanaiky ny hanangana fiaraha-miasa amin'ny banky cryptocurrency orinasa, hamaha ny fanaintainana teboka ho an'ny orinasa izay miasa ao amin'ity orinasa. taloha, Zurich mpiray fikambanana Falcon Private Bank no ambony indrindra-profil banky Soisa fanatitra tolotra ho blockchain ireo orinasa.
Tsy toy ny Falcon, Maerki Baumann tsy amin'izao fotoana izao no mikasa hanolotra cryptocurrency pananana fitantanana na ny asa am-ponja. Ny banky vao tsy ela akory dia namoaka tatitra momba cryptocurrencies izay izany hoe ny 'hanisy fiheverana "ao amin'ny kilasy pananana ity. Avy amin'ny tatitra: "Maerki Baumann dia hanisy fiheverana momba ny fampandrosoana ny fampiasam-bola ireo fitaovana sy ny mifanandrify fandrosoana eo amin'ny lafiny fitsipika… Maerki ankapobeny Baumann no vonona ny hanaiky vola niteraka alalan'ny cryptocurrencies, ho tombantombana izany amin'ny alalan'ny varotra, na eo amin'ny endriky ny fandoavam-bola ho an'ny asa nandray voalaza eo, na avy amin'ny harena ankibon'ny tany tombony.”
Zavatra banky foibe lamosiny cryptocurrencies in tatitra vaovao
Espaina ny Banky Foibe, Banco de España, Namoaka tatitra milaza fa ny fampiasana ny vola niomerika, indrindra rehefa misy nomerika dikan-tenin'ny fanjakana vola, Hanatsara ny firenena vola politika. Hoy koa ny Baiboly fa vola dizitaly afaka manampy amin'ny fanatsarana ny efa misy foto-drafitrasa ara-bola ny firenena.
Tale Jeneraly for Toekarena amin'ny BDE, Galo Nuno, hoy ny fampiasana cryptocurrencies afaka manana fiantraikany tsara eo amin'ny toe-karena. Ny antontan-taratasy ihany koa dia toa manondro fa, raha ny banky foibe mpiasa miasa ny blockchain, izany dia hanampy fitantanana ny zanabola sy ny vola famatsiana tsara kokoa.
Coinbase nitohy Bitcoin fividianana sy ny fivarotana any Wyoming, rehefa mahazo fankatoavana fitsipika
Coinbase dia fanatitra tolotra amin'ny mponina monina ao Etazonia fanjakan'i Wyoming indray, rehefa avy indray ny fahazoan-dàlana vola fitaovana fandefasam-peo tao Wyoming, manamarika lava-niandry miverina nanomboka nisintona Coinbase tampoka avy any amin'ny fanjakana telo taona lasa izay. Coinbase efa nanambara tamin'ny volana Jona 2015 fa ho lafo vidy, ary sarotra ny hanohy ny tolotra any Wyoming, rehefa nanazava panjakana dalàna ny orinasa nivembena ny vola Transmitter Act.
Ny lalàna ilaina tamin 'ny fotoana izay tsy maintsy Coinbase “avo roa heny piarovana” panjakana mponina’ fananana - midika hoe mitana Fiat vola tahirin rehetra fananan'ny crypto natao ny mpanjifa hanamarina - mba hanavao ny fahazoan-dàlana vola fitaovana fandefasam-peo. Na izany aza, ny Cowboy State nandalo malaza volavolan-dalàna tamin'ny volana Martsa tamin'ity taona ity izay ahitsy ny vola Transmitter Act mba hanome ny manamarina ny virtoaly vola “cryptocurrency orinasa in Wyoming dia tsy maintsy avo roa heny hitehirizany ny fananan'ny-panjakana mponina.”
West Virginia dia manolotra ny fivondronana finday blockchain fifidianana
Manam-pahefana avy any West Virginia mitondra ny blockchain-monina ny fifidianana rindrambaiko finday rehetra 55 fivondronana ao amin'ny fanjakana tao amin'ny hetsika mikendry ny mamela ny mpifidy tsy tonga tao amin'ny tafika hanary lavitra vatom-pifidianana ao amin'ny midterm fifidianana. Ny fanjakana ho namory ny blockchain rindrambaiko in May izay namela napetraka miaramila sy ny dependents nanipy vatom-pifidianana ao amin'ny Kilonga fifidianana.
Ny fampiharana dia mivelatra ka nalahany ny fifidianana teknolojia startup Voatz, izay nilaza ny teknolojia sy ny fivarotana encodes ny vatom-pifidianana amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra iray ao amin'ny tambajotra décentralisées dia asao mba hahazoana antoka ny fifidianana vaovao sy dinihina dia voaaro avy hatrany kokoa. Izany hoe:, Warner ny lefitry ny lehiben'ny mpiasa Michael Queen hoy ny fanjakana dia handao ny fanapahan-kevitra farany amin'ny fivondronana tsirairay raha toa ka hampiasa ny nascent Tech.
Report: Blockchain deployments mba hamonjy banky ny $ 27b isan-taona amin'ny alalan'ny 2030
Nisy fanadihadiana ny tsena fahalalana mafy zenevrie Hita tamin'ny fikarohana fa amin'ny naparitaka blockchain teknolojia, andrim-panjakana mijoro ara-bola mba hiteraka tahiry amounting ny Mihoatra ny $27 lavitrisa amin'ny miampita sisintany ponenana varotra amin'ny alalan'ny 2030. Miorina amin'ny an-rojo varotra, ny vola lany dia Nihena ny 11%.
Ny tatitra mitondra ny lohateny hoe “Ny Hoavy ny Blockchain: Key mitsangana Fahafahana & Paikady fanapariahana 2018-2030” tatitra banky izay mampiditra blockchain dia hahazo vola fihenan'ny fandoavam-bola tsy ara-fanodinana sy ny fampihavanana, fa amin'ny asa sy ny fanajana firaketana. koa, fikarohana ny vaovao fantatra mety tahiry ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa isan-karazany manerana ny orinasa, avy amin'ny saram-mihena an-trano ho an'ny mpividy ny nihena vola lany amin'ny sakafo ara-barotra fanondranana.